Xaaladda xeryaha qaxootiga ku sugan Talyaaniga oo aad cabasho laga muujiyey | Somaliska
Xaaladda xeryaha qaxootiga ku sugan Talyaaniga oo aad cabasho laga muujiyey
Xaaladaha qaxootiga ku sugan Talyaaniga ayaa maalinbba maalinta ka dambeeysa ay ka soo yeereysa qeeylo dhaan la xirriirta qaxootiga halkaasi ku sii qul qulaya. Gobolka Sycicilia ayaa waxaa soo gaaray sanadkaan oo keliya qaxootiga lugu qiyaasay konton kun kuwaas oo buuxiyey xeryihii qaxootiga loogu talagalay, islamarkaasina ay jiraan kuwo kale oo aanan heeysan xeryo.
Cara di Mineo, waxeey ku taala duleedka Catania på Sycilia, waxaa ku sugan muhaajirin gaaraya afar kun kuwaaas oo doomo kaga soo talaabay xadka Talyaaniga. Waxaa sidoo kale ku yaala xeryo loogu talagalay in la dejiyo labbo kun, hase ahaatee ay labbo kun oo kale aaneey heeysan xeryo oo ay dibad wareeg yihiin. Banaanka xeryaha waxaa gaaf wareega muhaajiriin sugaya in iyagana la siiyo xeryo, waxaase muuqata ineey qaadaneeyso muddo dheer in uun ay madaxa meel la helaan.
Gabadha lugu magacaabo Bintu oo ka timid Gana waxaa ay doon ka soo raacday Liibiya iyo labbo walaalaheed ah balse iyada oo qudha ey halkaasi gaartay. Mar ay u warameeysay weriyeyaal tagay ayey sheegtay ineeysan war u heeyn halka walaalaheed ku dambeeyaan nolol iyo geeri. Waxeey sheegtay in kolkii ay soo mareeysay Liibiya uu meel ku xareeystay nin sheegtay inuu askari yahay kaas oo kufsi u geeysan jiray maalin walba. Haatan halkaasi ma jirto qaabilaad, waxeey muhaajiriintan ku nool yihii rajo oo qura sida ay Bantu u sheegtay weriyeyaasha halkaas tagay, hey’daha dowladda ee qaxootiga u qaabilsan ayaa qudhooda ah kuwo aad u adag oo aan naxariis laheyn ayey tiri Bantu.
“Hooyadeey waxaa ku dhacay qalal dhinac ah, habaryarteey oo iyadana ii aheyd hooyo kale waxaa looga soo booday wadnaha. Halkan waxeey noo maleeyaan inaan xaquuq laheyn sida ay noola dhaqmayaan shaqaalaha Talyaaniga, waxaan xaq u leeyahay inaan eheladeyda la hadlo” ayey tiri ” Ma ahan waxa dhibaatadda Bantu qabto mid keligeed ah waxaa la qaba kumaan kun oo qaxooti ah oo ay soomaalida ka mid tahay.
Saas oo ay tahayna ma jirto xog badan xilligan ka heeysa xerryahaasi laga cabaadayo. Ugu yaraan toddobaad kasta waxaa Talyaaniga taga doomo ay saaran yihiin muhaajiriin ka yimid dhanka Liibiya. Wasiiradda Yurub ee cadaaladda ayaa toddobaadkii hore shir ay ku yeesheen Iislaan kaga arrinsadeen siddii loo xakameeyn lahaa qaxootiga faraha badan ee dhanka Talyaaniga ka imanaya.